हामीले खाने खाना कस्तो हुनुपर्छ थाहा पाई रखनुहोस? – News Nepali Dainik
हामीले खाने खाना कस्तो हुनुपर्छ थाहा पाई रखनुहोस?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण ०७, २०७७ समय: २२:२८:३९
हामीले खाने खाना सन्तुलित हुनुपर्छ । सन्तुलित भोजन त्यही हो, जसमा हाम्रो शरीरको लागि आवश्यक सबै तत्व हुन्छ । हाम्रो शरीरलाई खनिज, भिटामिन, प्रोटिन फाइवर लगायत अन्य विभिन्न तत्वको पनि जरुरत पर्छ । त्यसका साथै चिल्लो, गुलियो, नुनिलो वस्तु न्युनतम मात्रामा आवश्यक पर्छ। खानामा यस्ता तत्व पनि सन्तुलित रुपमा समावेस भएको हुनुपर्छ । तर चिल्लो, गुलियो र नुन चाहिँ चाहिने भन्दा बढी र भिटामिन, प्रोटिन, खनिज, फाइवर जस्ता महत्वपूर्ण तत्व चाहिँ नाम मात्रको भएमा हामी रोगी बन्छौँ ।
हामीले हाम्रो स्वास्थ्य त्यसमा पनि मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि जंक फुड होइन अरु खानालाई छान्नु नै बुद्धिमानि हुन्छ । जंक फुडको प्रचलन हुनु अघि मानिसहरुले पेय पदार्थका रुपमा पानी, दुध, दही, मोही, लस्सी, ताजा जुस, कागती पानी प्रयोग गरी भिटामिन, खनिज, प्रोटिन आदि प्राप्त गरिरहेका थिए । खाजाको रुपमा गहुँ, कोदो, फापर, मकैको रोटी, गहुँ, चिउरा, भटमास, चना, केराउ, बोडीको परिकार, हरियो मकै, हरियो तरकारीका परिकार, आलु, सखरखण्ड, काँक्रो, गाजर, मुला, मेवा, केरा आदि जस्ता स्वास्थ्यबद्र्धक खाद्य वस्तुहरु प्रयोग गर्ने गरेका थिए । तर आज यस्ता खाद्य वस्तुको प्रयोग ज्यादै नै न्युन भएर गइसकेको छ । जंक फुडको सट्टा यस्तै खाद्य वस्तुको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ ।
यस्ता खाद्य वस्तुको प्रयोग अहिले पनि केही मात्रामा हुने गरेको पाइन्छ । तर यसको प्रयोग गर्दा तेलमा तारेर, भुटेर, ज्यादा मसला, नुन, चिनी प्रयोग गरेर खाने गरिन्छ । जसले गर्दा यसमा भएको पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । शरीरलाई हानी पु¥याउने तत्वको मात्रा भने बढ्न जान्छ । त्यसकारण परम्परागत खाद्य वस्तुहरुको प्रयोग गर्दा पनि सही तरिकाले पकाउन आवश्यक छ । दैनिक खानामा फलफुल र हरियो तरकारी समावेश गर्नुपर्छ ।
Last Updated on: February 19th, 2021 at 10:28 pm